Tuullaan reeffaa 'bara duguuggaa sanyii' Ruwaandaa argame - BBC News Afaan Oromoo
Tuullaan reeffaa 'bara duguuggaa sanyii' Ruwaandaa argame
26 Elba 2018
Goodayyaa suuraa Waraana duguuggaa sanyii sanaan namoonni 800,000 ta'an dhumaniiru
Ruwaandaa keessatti iddoon tuullaa reeffa namootaa kan bara 1994 waraana duguuggaa sanyiitiin dhumanii bakka afuritti argameera.
Handaara magaala Kigaaliitti kan argamtu aanaa Gasaaboo jedhamtu keessatti , lafeen namoota 200 duguuggaa sanyiitiin dhumanii kan argame.
Wayita waraanaa sana namoota 3,000 tu achi buuteen isaanii dhabaman, kan jedhan jiraattonni naannoo kanaa reeffi namoota dhabamanii hundinuu boolla reeffaa abuurame kana keessa jiraachuu mala jedhu.
Waraana duguuggaa sanyii bara 1994 irratti hidhattoonni warra Huutuu saba Tuutsii fi Huutuu yaada walabaa qaban kuma 800 guyyoota 100 keessatti fixan.
Iddoowwan reeffi namoota wareegamanii itti walitti guuraman taateen sun raawwatee torbee lama booda wayita guyyaan ajjeechaa sanaa yaadatamu ifa ba'eera.
Odeeffannoo reeffi namootaa boolla keessa jiraachuu nama naannoorraa dhagahaniin tola ooltonni iddoo owwaalaa jiran sakatta'uun ifa baasaatti jiru.
''Bakka namootni tuutaan itti awwaalaman hedduurratti manneen ijaaramaniiru, wayita bira ga'amu garuu manneen hedduun ni deegamu. Hanga iddoowwan namoonni itti awwaalaman arfan argamanitti hojii itti fufna,'' jechuun gaazeexaa Ruwaandaa News Day jedhamutti dubbatan qondaalli Hojii Tola Ooltummaa Barbaacha Reeffa Namootaa Ibuka jedhamuu Théogene Kabagambire.
Iddoon namoonni itti awwaalaman shanaffaan barbaacharra jiraachuuraachuusaanii kan dubbatan Obbo Kabagambiren namoonni yakka duguuggaa sanyiitiin himatamanii turan iddoo namoonni itti awwaalaman nutti himuurraa of qusachaa jiraachuu dubbatan.
Namoonni yakka duguuggaa sanyii keessati qooda fudhatan hidhamanii adabbiisaanii xumuranii ba'aniiru, firoonni warra du'anii garuu ammallee reeffa lammiisaanii barbaadaatti jiru. Reeffa firasaanii argatanii awwwaala gootaa awwaallachuu akka barbaadanis dubbatu.
Waraanni duguuggaa sanyii Ruwaandaa Eebla 6 bara 1994 wayita xiyyaarri Pirezidaantii Ruwaandaa yeroo sanaa Habyarimana fi gitasaanii kan Burundii Cyprien Naryamira baattee turte butamtee kufte ture, xiyyaara sana keessa namoonni turan hunduu ni dhuman.
Dhaadhessitoonni warra Huutuu gocha kana garee finxaaleyyii Tuutsiitu raawwate jechuun miira aariidhaan guutameen duguuggaa sanyii eegalan
Walitti dhufeenya sanyii fi aadaafi eenyummaa
'Dhimma afaanii irratti wanti murtaa'e hin jiru'
'Ummanni Oromoo dhiifama gaafatamuu qaba'
Kanneen daa'ima gudeedanii ajjeesan irratti duuni murtaa'e
Shamarran abbaa ajjeesan akka hiikaman gaafatame
Fincilaan duraanii filannoo Somaaliyaa irra deebiin falataman
Namtichi Kookeenii saamsaa 60 liqimsee dabarsuuf yaale qabame
'Lubbuu keenyaafi uffata ofirraa qabnu malee homaa qabannee hin baane'
Namichi qaama dubartootaa uffatanni irraa soqolame viidiiyoon waraabe himatame